China Adjustable hazondamosin-tsoroka aorin-tànan-tsoroka aorinan'ny mpiorina aoriana Belt PC-03 mpanamboatra sy mpamatsy | marina
Manala ny tsy mahazo aina amin'ny hatoka sy ny lamosina amin'ny fipetrahana miaraka amin'ny soroka boribory eo alohan'ny solosaina.
Nylon sy ny landihazo
Ireo olona azo ampiharina:
farango sy tadivavarana
Fiarovana, fisorohana ny fitongilanana
Mpanapitsaka posture azo averina ambony
Manaiky Logo manokana
TT. Fiantohana ara-barotra
Fanitsiana fiorenan'ny lamosina miverina amin'ny lamosina
SIZE azo ovaina–Ny fanitsiana avy amin'ny 28 ka hatramin'ny 42 Inch ary 38-48 Inch amin'ny refin'ny tratra.
Fanitsiana manontolo–Shoulder Support Brace Avereno amin'ny toeranao tsara ny tamponao ambony. Ary avy eo manatsara ny fihetsika amin'ny vatanao iray manontolo mandritra ny asa na ny fiainana.
Mampiasà amin'ny fotoana rehetra-Afaka ampiasainao izy io tsy rehefa mipetraka amin'ny solosaina na mitondra fiara ianao, fa rehefa milalao fanatanjahan-tena na zaridaina ihany koa ianao. Ankoatr'izay, azonao ampiasaina any an-trano izany rehefa manao raharaha ao an-trano ianao, na mijery tele.
AZO AMPIHARINA–Ny paosin-drindrina napetraka miaraka amin'ny neoprene maivana, azo anaovana akanjo milay tsara na ambanin'ny akanjo. Manitsy ny fihetsikao tontolo andro. Afaka mitafy sy manamboatra irery ianao.
Mampiasà isan'andro– Ity fanohanana lamosina maivana ity dia tokony hatao isan'andro. Andro roa voalohany dia mitafy azy mandritra ny 10-20 minitra fotsiny, toy izay manampy 10 minitra isan'andro. Ny lamosinao sy ny sorokao dia hiova miadana ary hanangana fahatsiarovana hozatra ho an'ny fihetsika mety ianao.
1. Aza mamontsina.
2. Mampiasà rano mangatsiaka amin'ny tanana.
3. Aza mampiasa tsy fahampian-drano amin'ny milina fanasan-damba, tsy misy ny fanasana rano mafana.
Fonosana ao anatin'izany: Iray amin'ireo mpanitsy neoprene matevina maivana
1. Nahazo fankatoavana tamin'ny CE Rohs sy FCC izahay amin'ny vokatra rehetra.
2.We dia mpamatsy matihanina amin'ny jiro avo lenta amin'ny vidin'ny fifaninanana.
3.Ny iray amin'ny serivisinay manasongadina dia ny ahafahantsika manamboatra vokatra, toy ny kojakoja amin'ny jiro, sary famantarana, loko, boaty fanangonana sns.
4.Ny vokatray dia amidy tsara any Eropa sy Amerika, Amerika Latina, Moyen Orient, firenena sy faritra maherin'ny 100, toa an'i Etazonia, Alemana,
Espana, Italia, Suède, France ary Russia.
5. Nahazo laza tsara eo amin'ny mpanjifanay izahay.
6. Amin'ny fiaraha-miasa aminay, azoko atao ny manome anao ny serivisy mialoha ny varotra tsara sy aorian'ny fivarotana.
Ho an'ny mpivarotra Amazon
1.we manana fantsom-pitaterana avo lenta ary afaka mandefa azy ireo any amin'ny trano fitobiana Amazon.
2.manana ny mpanonta amerikanina Zebra isika, izay afaka manonta mazava tsara ny marika momba ny vokatra Amazon.
3. afaka mametaka marika ho an'ny mpivarotra Amazon maimaimpoana izahay
4. tena mahazatra antsika ny fizotry ny fanorenan-trano any Amazon FBA
Fijerena momba ny mpanjifa any Amazon
Previous: Portable Adjustable Elastic Infrared Self-fanafanana fanaintainana ambany fanaintainana fitsaboana andriamby miverina valahana Support Lumbar fehikibo fehikibo
Manaraka: Servieta microfiber ara-panatanjahan-tena avo lenta zip
azo zakaina ny fihetsika
azo ovaina ny fihetsika
miverina amin'ny laoniny
fanamafisana ny fihetsika
fanohanana miverina miorina
fampahatsiahivana ny fananganana fihetsika
mihetsika ny mpamadika posture
Fanatanjahan-tena amin'ny lohalika vita amin'ny lamba volon'aretina volon'osy ...
Fanamafisana marika manokana momba ny marika manokana ...
Knee Brace Sports Protective Breathable Nylon K ...
Fehin-kibo amin'ny fehin-kibo mihetsiketsika hatsembohana ...